Dr. Geetaahun Kaasaa hojii Boordii filannoo Biyyaalessa dhiisuuf xalayyaa galfatan. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsDr. Geetaahun Kaasaa hojii Boordii filannoo Biyyaalessa dhiisuuf xalayyaa galfatan.
Boordii Filannoo Biyyaalessa Itiyoophiyaatti, hoji geggessitoota boordichaa keessaa tokko kan ta’an, Dr. Geetaahun Kaasaa guyyaa har’aa Fulbaana 28, 2020 wayyaba ta’uu adeemsa boordii filannoo Biyyaalessa Itiyoophiyaa nan amansiisne jechuun, xalayyaaa hojii fi gita geggeessummaa gad lakkisuu akka barbaadan ibsu Mana marii bakka bu’oota Uummataa ADWUI-tiif, galfachuun isaanii dhaga’ame.
Filannoon Biyyaalessa Itiyoophiyaa yeroo karoorfametti adeemsifamuu dhabuusaan wal qabatee, biyyattii keessatti gaaga’amni siyaasaa hamaa mullachaa jiraachuu yeroo garaagaraatti hayyoonni siyaasaafi hooggantoonni paartile moorkattootaa dubbachaa turaniiru.
Dr. Geetaahun, fedhii ofiitiin boordicha keessaa of baasuun isaaniis muffii fi shakkii adeemsa filannoo diimokiraatawaa geggeeffamuu dhabuusaaf qaban irraa ka’eeti shakkiin jedhus toora marsaa Hawaasummaa irra naanna’aa jiraatuus, hanga yoonaa sababni hojii gad lakkisuu isaanii quubsaatti hin ibsamne.
Haa ta’u nalee hoji geggeessummaa boordichaa keessaa of baasuun nama kanaa, Mootummaan hojii boordii filannoo keessa harka galfachuun akka ofii fedhu gochuu barbaada shakkii jedhamaa ture dhugoomsas jechuun namoonni yaada isaanii ibsachaa jiru.
Waliigaltee Paartiilee Dhiheenya Mallatteessametti Otuu Hin Hirmaatiin Akka Hirmaanneetti Maqaan Keenya Dhahame: KFO